Izakhiwo zeofisi ze-post e-US - Ngaba sifanele sizigcine?
Ngubani Ongasindisa Ama-Post Post?
Le Geneva, i-Illinois Post Post yabizwa ngo-2012 uludwe lweMelika ezili-11 eziMngcipheko eziMngcipheko. Ifoto © Matthew Gilson / iTrust yeSizwe yokuLondolozwa kweMbali (ihlanjwe)
Akafi. Baya kugqiba ukuhanjiswa kweMigqibelo, kodwa i-US Postal Service (USPS) isayikhulula. Iziko likhulile kuneMelika ngokwalo-iContinental Congress yakha iofisi yeposi ngeJulayi 26, 1775. UMthetho we-Febhuwari 20, 1792 wawusisigxina ngokusisigxina. Igalari yethu yesithombe yeePost Office Buildings eUnited States ibonisa ezininzi zezi ndawo zombuso. Bhiyozela ubugcisa babo, ngaphambi kokuba bavale ngokupheleleyo.
Umngcipheko waseGeneva, i-Illinois Post Office:
Le ofisi eposini e-Geneva, e-Illinois, kunye nezakhiwo zeposi zezithuba ze-post e-USA zonke, zisengozini, ngokubhekiselele kwi-National Trust ye-Historic Preservation.
Isakhiwo seofisi ye-post e-Amerika sisoloko sibonakalisa ukwakheka kwendawo, nokuba i-colonial designs e-New England, iimpembelelo zaseSpain kumzantsi-ntshona, okanye "uphuhliso lwezakhiwo" zase-Alaska zasemaphandleni. Kuzo zonke i-US, izakhiwo zeofisi zeposi zityhila imbali yelizwe kunye nenkcubeko yoluntu. Kodwa namhlanje ezininzi iiofisi zeposi zivalwa, kwaye abagcini bexhala baxhala malunga nesimo se-PO esichukumisayo kunye ne-iconic.
Kutheni i-Post Office ilukhuni ukuGcina?
Inkonzo yeposi yase-US ngokuqhelekileyo ayikho kwishishini langaphandle. Ngokomlando leli nqumrhu liye lafumana ixesha elinzima ukugqiba isithuba sezakhiwo abaye bangena okanye abangenalo. Inkqubo yabo ayisoloko icacile.
Ngo-2011, xa i-USPS igawula iindleko zokusebenza ngokuvala amawaka eenkhundla zesikhundla, isikhalazo esivela kwisizwe sase-Amerika sagqiba ukuvalwa. Abathuthuli kunye neSizwe seTrust baxhalabisa ngokungabikho kombono ocacileyo wokulondolozwa kwelifa lezakhiwo. Nangona kunjalo, ezininzi izakhiwo zeofisi zeposi azizange zinikezelwe yi-USPS, nangona isakhiwo sisoloko siyinxalenye ebalulekileyo yoluntu. Ukugcinwa kwanoma yiphina isakhiwo kudla ngokuwa kwindawo leyo, onomdla okhethekileyo wokugcina isahlulo sembali yendawo.
I-National Trust ye-Historic Preservation yabiza i-America ye-Post Office yase-US yeeNdlu zeZakhiwo kwizakhiwo zayo zakhiwo ezisengozini ngo-2012. Masihambe ngaphesheya kwe-US ukuba sihlolisise le ngxowankulu yaseMelika-kuquka neyona inkulu nakakhulu kunazo zonke.
Springfield, eOhio Post Office
Iofisi yeposi yase-Art Deco e-Springfield, e-Ohio yaqala ukwakhiwa ngo-1934. Iintshontsho ezinkulu ziphezulu kwiinkalo ze-facade. Khetha umfanekiso ukujonga ubungakanani obupheleleyo kwiwindow entsha. Ifoto © Cindy Funk, Creative Commons-ilayisenisi kwi-flickr.com
Isakhiwo sase-Springfield, eOhio:
Isakhiwo seofisi yeposi sasiyinxalenye ebalulekileyo ye-colonization kunye nokwandiswa kweMelika. Imbali yokuqala kweso sixeko saseSpanish, e-Ohio yenza into enje:
1799, umntu wokuqala wokuhlala (ikhabini yokuqala)
1801, ukuthungula kuqala
1804, iposi yokuqala
I-Post Office Ngethuba lokuCaluleka okukhulu:
Isakhiwo esiboniswe apha akusiyo ipostile yokuqala, kodwa imbali yayo ibalulekile kwimbali yaseMelika. Eyakhelwe ngowe-1934, isakhiwo sibonisa ubugcisa bokuqala be- Art Deco eyaziwayo kwixesha lokuqala leminyaka. Eyakhelwe ngamatye kunye nekhonkrithi, ingaphakathi lezakhiwo lihlotshiswe ngumboniso nguHerman Henry Wessel-ngokuqinisekileyo yayithunywe yi-Works Progress Administration (WPA). I-WPA yayiyinye yeeprogram ezilishumi eziphezulu ze-Deal Deal ezancedisa i-US ukuba ibuyele kwi-Depression Great. Izakhiwo zeofisi zeposi zazihlala zifumana abaxhamli beWindows Works Works of Project Project (PWAP), yintoni eyenza ubugcisa obungavamile kunye nokwakhiwa kwezakhiwo zihlala ziyinxalenye yezi zakhiwo zikaRhulumente. Ngokomzekelo, le facade ye-post post yase-Ohio ibonisa ii-eagles ezimbini ezihamba ngeenyawo ezikhangelelene nomgca wophahla, omnye kwicala ngalinye lomnyango.
Njengoko amaxabiso emandla aphakama ngawo-1970, ii-buldings zikawonkewonke zahlengahlengiswa. Imibukiso yembali kunye nesibane esibhakabhakeni kwesi sakhiwo sahlanganiswa ngeli xesha. Imizamo yokulondolozwa ngo-2009 yabuya yabuyisa umva kunye nokubuyiselwa koyilo lwembali lwama-1934.
Imithombo: Imbali kwi-www.ci.springfield.oh.us/Res/history.htm, iSayithi esisemthethweni saseSixeko saseSpermfield, eOhio; I-Ohio Historical Society INFO [efikelele ngoJuni 13, 2012]
Honolulu, i-Post Office yaseHawaii
I-Post Office yaseUnited States, iNdlu yeNdwendwe kunye neNdlu yeNkundla, ngo-1922, iSithili saseKapitol, Honolulu, eHawaii, ngoJanuwari 2012. Khetha umfanekiso ukujonga ubungakanani obupheleleyo kwiwindow entsha. Ifoto © Michael Coghlan, Creative Commons-ilayisenisi kwi-flickr.com
Abakhi beeNew York baseYork noSawyer baqulunqe lesi sakhiwo sakwa-1922 sesebenzi ezininzi kwisitayela ezikhumbuza iimpembelelo zaseSpain eziqhelekileyo kwi-southern California. Iindonga ezinqambileyo, ezimhlophe kunye neentlambo ezivulekileyo eziphefumlelweyo zeMedithera zenza lo Mhlaba wobuKoloni bobuKoloni bokuBuyiselwa kobuKhulu obuphambili ngokukhula kunye nokuphuhliswa kweHawaii.
I-Hawaiian Territory yaba ngowama-50 karhulumente wase-US ngo-1959, kwaye isakhiwo sasikhuseleka ngo-1975 ngokubizwa ngegama leRejista kaZwelonke yeNgingqi (i-75000620). Ngomnyaka ka-2003 uRhulumente waseburhulumenteni wathengisa isakhiwo sembali ukuya kwilizwe laseHawaii, owathiwa ngokuba yiKing Kalakaua Building.
Thatha uhambo lokuhamba nge-Historic Honolulu >>
Umthombo: I- Star Bulletin , ngoJulayi 11, 2004, i-archive online [eyafika ngoJuni 30, 2012]
Yuma, e-Arizona Post Office
Ngowe-1933 ubugcisa bobugcisa, umsebenzi kunye neSakhiwo saseSpain ye-post ye-post eYuma, e-Arizona. Khetha umfanekiso ukujonga ubungakanani obupheleleyo kwiwindow entsha. Ifoto © David Quigley, poweron, Creative Commons-ilayisenisi kwi-flickr.com
Njengeposi eposini e-Springfield, e-Ohio, indawo yokudala yaseYuma yakhiwa ngexesha lokudakumba okukhulu, ngowe-1933. Isakhiwo ngumzekelo omhle wexesha kunye neendawo zokwakha izakhiwo-ukudibanisa i- Beaux Arts style ethandwa kakhulu ngexesha kunye ne- Spanish Mission Colonial Iimpawu zokuvuselela zeMerika yaseMzantsi Melika.
Isakhiwo saseYuma sabekwa kwiRejista kaZwelonke yeNgingqi ye-1985 (# 85003109). Njengezakhiwo ezininzi ezivela kwixesha loxinzelelo, lesi sakhiwo esidala siye sachitshiyelwa ukusetyenziswa ngokutsha kwaye yinkampani yase-US yenkampani yeGowan.
Funda kabanzi malunga nokuSebenziselwa kokuSebenza okuHlangayo >>
Imithombo: IRejista kaZwelonke yeZindawo zeMbali; kwaye tyelela iYuma kwi-www.visityuma.com/north_end.html [kufumaneka ngoJuni 30, 2012]
La Jolla, i-Post Office yaseCalifornia
Umfanekiso wesakhiwo seofisi esiphefumlelweyo saseSpain eLa Jolla, eCalifornia. Khetha umfanekiso ukujonga ubungakanani obupheleleyo kwiwindow entsha. Ifoto © UPaul Hamilton, paulhami, Creative Commons-ilayisenisi kwi-flickr.com
Njengofom yeofisi e-Geneva, e-Illinois, isakhiwo saseLa Laolla siye sachongwa ngokucacileyo yi-National Trust njengengozi ngo-2012. Abahlengikazi bezilondolozo be-La Jolla Historical Society basebenzisana ne-US Postal Service yokuSindisa i-La Jolla Post Office. Hayi kuphela le ofisi yokuposa "isakhiwo esithandekayo kwingingqi yorhwebo," kodwa isakhiwo sinemifanekiso yembali yangaphakathi. Nje ngeposi e-Springfield, e-Ohio La Jolla ithathe inxaxheba kwiMisebenzi yoLuntu yeProjekthi ye-Art (PWAP) ngexesha loKuPhukisa okukhulu. Ingqwalasela yokulondolozwa yidrafti ngumculi weBela Baranceanu. Ukwakhiwa kwezakhiwo kubonisa iimpembelelo zaseSpeyin ezitholakala kulo lonke elasezantsi Kalifornia.
Ukutyelela i-La Jolla Area >>
Imithombo: iTrust yeSizwe yokuLondolozwa kweMbali kwi-www.preservationnation.org/who-we-re/press-center/press-releases/2012/US-Post-Offices.html; Gcina i-Ofisi yethu yeposi yaseL La Jolla [efikelele ngoJuni 30, 2012]
Ochopee, eFlorida, i-Post Office encinci eMelika
I-post eyona ncinane kunazo zonke e-United States, e-Ochopee, eFlorida, ngo-2009. Uphawu olusetyenziswe ukuba lube phezu kophahla. Khetha umfanekiso ukujonga ubungakanani obupheleleyo kwiwindow entsha. Ifoto © Jason Helle, Creative Commons-ilayisenisi kwi-flickr.com
I-Post Office encinci eMelika:
Kwimitha engama-61.3 nje, i-Ochopee Main Post Office eFlorida isisiseko seposi sase-United States esincinane. Ummakethi wembali osondeleyo ufunda:
"Njengolu hlobo lwepostile elincinane kunazo zonke eUnited States, lesi sakhiwo sasisakuba ngumbhobho wokunkcenkceshela we-JT Gaunt kwifama ye-tomato epulazini. Yanyanzelwa ngokukhawuleza ukuba isebenze ngu-postmaster uSidney Brown emva komlilo ophazamisayo ebusuku ngo-1953 watshisa i-Ochopee jikelele isitoreji kunye neofisi yepostile. Isakhiwo samanje sisetyenziswe ngokuqhubekayo ukususela - njengokuba zombini iofisi yepostile kunye nesikhululo setikiti zendlela zebhasi ze-Trailways-kwaye zikhona iinkonzo zemihlali kwindawo emithathu, kuquka ukuthunyelwa kumaNdiya aseMeminole naseMiccosukee ahlala Ummandla woshishino nosuku luquka rhoqo izicelo ezivela kubakhenkethi kunye nabaqokeleli beetampu emhlabeni jikelele kwi-postmark eyaziwayo ye-Ochopee.
Lesi sithombe sithathwe ngoMeyi 2009. Iifoto ezidlulileyo kule ndawo zibonisa uphawu oluhlanganiswe phezulu kwiphahla.
Thelekisa i-Ochopee kunye nepositi kaMichael Graves kwiSigodi , eFlorida >>
Umthombo: USPS Facts page [kufumaneka ngoMeyi 11, 2016]
I-Post Office yaseLexington Woods igcinwa yiMyuziyam yoLondolozo lweNgcaciso yaseLexington. Lesi sithombe sithathwe ngoSeptemba 21, 2011. Khetha umfanekiso ukujonga ubungakanani obupheleleyo kwiwindow entsha. Ifoto © 2011 Valerie, Valerie's Genealogy Photos, Creative Commons-ilayisenisi kwi-flickr.com
Isakhiwo seofisi ye-post e-1820 eLexington Woods, eLexington, eSouth Carolina yinkqubo ye-caloni ye-colonial eguqulwayo, igolide enzulu kunye ne-shutter emhlophe kunye ne-shutters emnyama.
Esi sakhiwo sembali sigcinwe kwiMyuziyam yoLondolozo lweLexington, evumela iindwendwe ukuba zenze ubomi eSouth Carolina ngaphambi kweMfazwe yombutho. Abanye bathi ingoma ethi "Ndinike Le Nkolo Yexesha Elidala" yabhalwa kwesi sakhiwo.
Umthombo: i-Lexington County Museum, iLexington County, South Carolina [kufumaneka ngoJuni 30, 2012]
Inkukhu, i-Alaska Post Office
I-post cabin post ye-Chicken, e-Alaska, ngoAgasti 2009. Khetha umfanekiso ukujonga ubungakanani obupheleleyo kwiwindow entsha. Ifoto © Arthur D. Chapman no-Audrey Bendus, i-Creative Commons-ilayisenisi kwi-flickr.com
Esinye isitampu sokuposa sivumela iqela leposi ukuba lihambe ngaphesheya kwesitrato okanye yonke indlela eya kwimikuku yasemaphandleni, eAlaska. Ukuhlaliswa kwembambano encinci kwabemi abangaphantsi kwe-50 isebenza kumbane ongenamandla kwaye ngaphandle kokucoca ngamanzi okanye inkonzo yefowuni. Ukuthunyelwa kweposi, nangona kunjalo, kuye kwaqhubeka ukusukela ngo-1906. Njalo ngoLwesibili noLwesihlanu inqwelo ihambisa i-imeyile yase-US.
Izakhiwo zeofisi zeeFranti:
I- log cabin , isakhiwo sophahla lwezotyhulwa yinto nje enokuyilindela kumda we-Alaskan. Kodwa ngaba uxanduva lolawulo lweburhulumenteni ukubonelela ngeenkonzo zeposi kwiindawo ezikude? Ngaba lesi sakhiwo siyimbali ngokwaneleyo ukuba sigcinwe, okanye ngaba i-US Postal Service iya kuphuma?
Kutheni bambiza ngokuthi inkukhu? >>
Umthombo: Imibuzo Ebuzwa Ngokuphindaphindiweyo, Inkukhu, iAlaska [efike ngoJuni 30, 2012]
Bailey Island, i-Post Office yaseMaine
I-Post Post yase-US yaseBaley Island, eMaine, ngoJulayi 2011. Khetha umfanekiso ukujonga ubungakanani obupheleleyo kwiwindow entsha. Ifoto © Lucy Orloski, namhlanje, Creative Commons-ilayisenisi kwi-flickr.com
Ukuba i-log cabin architecture yinto enokuyilindela kwi-Chicken, e-Alaska, le ofisi yepositi yetyuwa ebomvu-ebhitshiweyo emhlophe, iyafana neNdawo ezininzi zeColoni eNew England .
I-Bald Head Island, i-North Carolina Post Office
Ipostile kwiBald Head Island, eNorth Carolina, ngoDisemba 2006. Khetha umfanekiso ukujonga ubungakanani obupheleleyo kwiwindow entsha. Ifoto © Bruce Tuten, Creative Commons-ilayisenisi kwi-flickr.com
Iposta ye-post e-Bald Head Island ngokucacileyo inxalenye yaloo ndawo, njengoko kubonakaliswe izihlalo ezigubungelayo. Kodwa, njengamanye amaziko amancinci, ngaba iindleko zokuthumela iposi ziningi kakhulu ukuba zisebenzise ezimbalwa? Ngaba indawo ezifana neBhayley Island, Maine, Inkukhu, i-Alaska, ne-Ochopee, eFlorida ingozi yokuvalwa? Ngaba kufuneka zigcinwe?
Ofisi yeposi yaseRussell, eKansas
Ipostile kwiRussell, eKansas, ngoAgasti 2009. Khetha umfanekiso ukujonga ubungakanani obupheleleyo kwiwindow entsha. Ifoto © Colin Grey, CGP Grey, Creative Commons-ilayisenisi kwi-flickr.com
Iofisi yokuzitena ezothambileyo eRussell, eKansas iyilwayilo lwakhiwo lwezakhiwo zedolophu ekhutshwe ngekhulu lama-20 leminyaka eMelika. Efunyenwe kulo lonke elase-US, olu lwakhiwo luyi-stock stock Design colonial revival style eyenziwe yiSebe lezeMali.
Ukwakhiwa okwakuthethayo kwakuhloniphekile kodwa kulula-kulindeleke kuzo zombini i-Kansas yolondolozo lwentlalo kunye nomsebenzi wesakhiwo. Amanyathelo aphakanyisiweyo, uphahla oluqingqiwe , iiwindow ezine-4-ngaphezu kwe-4 ezifanayo, i-windvane, isikhokelo sendawo, kunye nokhozi phezu komnyango ziyi-design design standard.
Enye indlela yokudibana nesakhiwo yimiqondiso yayo. Qaphela ukuba amaphiko aphakanyisiweyo yokhozi luyilo olusetyenziswe emva kweMfazwe Yehlabathi II ukuhlukanisa uphawu lwaseMelika ukusuka kumaaphiko aphakanyisiweyo okhozi lwamaNazi. Thelekisa uRussell, uKansas ukhozi eneenkwenkwezi e-postfield yase-Springfield, e-Ohio.
Ngaba ulwahlulo lwalo lwakhiwo, nangona kunjalo, lwenza le sakhiwo sibe yimbali engaphantsi-okanye ingekho yingozi?
Thelekisa le ngxelo yeofisi yeposi yaseKansas kunye ne-PO eVermont >>
Umthombo: "I-Post Office - Ikhonkco Yomphakathi," Ukugcina I-Post Office Architecture ePennsylvania kwipa.gov (PDF) [kufumaneka ngo-Oktobha 13, 2013]
Middlebury, i-Post Office yeVermont
I-Middlebury, i-Ofisi yeposi yaseVermont izama ukubala. Khetha umfanekiso ukujonga ubungakanani obupheleleyo kwiwindow entsha. Ifoto © Jared Benedict, redjar.org, Creative Commons-ilayisenisi kwi-flickr.com
"Ndiza kuthatha iifoto ze-mundane" kutsho lo mfanekiso we-Middlebury, kwi-Vermont Post Office. Ukwakhiwa kwezakhiwo "eziqhelekileyo" zifana nezincinci, zendawo, izakhiwo zikaRhulumente ezakhiwe ngekhulu lama-20 leminyaka eMelika. Kutheni sibona ezininzi zezi zakhiwo? ISebe leSebe leMali le-US likhuphe izicwangciso zokwakha izakhiwo. Nangona iiplani ziyakwazi ukuguqulwa, izicwangciso zazilula, izitena zezitena ezilinganiselwe ezibonakaliswa njengevuselelo lwama-colonial okanye "i-classical moderne."
Thelekisa le sakhiwo seposi saseVermont kunye neRussell, eKansas. Nangona isakhiwo sifana nokuthobeka, ukudibanisa kwee-columns kufuna ukuba le ofisi yepostile ifaniswe nalawo aseMamineral Wells, eTexas nakwiNew York City.
IiNgcaciso zeMigodi, i-Post Office yaseTexas
I-classical Mineral Wells, iposi yaseTexas yachithwa ngo-1959. Khetha umfanekiso ukujonga ubungakanani obupheleleyo kwiwindow entsha. Ifoto © QuesterMark, Creative Commons-ilayisenisi kwi-flickr.com.
Njengomdala waseCanañon City Post kwiColorado, i-Old Mineral Wells Post Office iye yagcinwa kwaye yabuyiselwa kwakhona kuluntu. Ummaki wembali osondeleyo uchaza imbali yale sakhiwo esibukhulu phakathi kweTexas:
"Ukunyuka kokukhula kwesi sixeko emva kowe-1900 kwakha isidingo seofisi epostile enkulu. Lesi sakhiwo sasiyinxalenye yesithathu eyakhiwe apha emva kokuba inkonzo yenkonzo iqale ngowe-1882. Yakhiwa phakathi kwe-1911 no-1913 yekhonkrit eqinisekisiwe kwaye igqoke ngezitena. Iinkcukacha zezinga eliqhelekileyo lokuthumela iiofisi zexesha zigqitywe nge-calestone trim. Ukukhanya kwangaphakathi kwakuqala ukusetyenziswa kwegesi kunye nombane.Uyilo luchazwe ngumqulunqi wezeMali wase-US uJames Knox Taylor.Iziko leposi livaliwe ngo-1959 kwaye isakhiwo senziwa ngaloo nyaka kwisixeko ekusebenziseni uluntu. "
I-Miles City, i-Post Office yaseMontha
Isakhiwo sitena siye saba yi-Miles City, e-Montana ofisi yeposi ukususela ngo-1915. Khetha umfanekiso ukujonga ubungakanani obupheleleyo kwiwindow entsha. Ifoto © 2006 David Schott, Creative Commons-ilayisenisi kwi-flickr.com.
Iifestile ezine zePalladian ezilinganiselwe kwisiteji sokuqala zomgangatho ngamnye zihamba ngeesibini ezilinganayo zeefestile ezimbini. Umbono wamehlo uphakama ngakumbi kwinto ebonakalayo yombumba we-dentil phantsi kwe- balustrade ephahleni.
Yenziwe eMelika, 1916:
Ukuhlaziywa kwe-Renaissance Revival kwenzelwe ngu-Oscar Wenderoth ongumakhi we-Treasury wase-US kwaye wakhiwa ngo-1916 nguHiram Lloyd. I-Miles City Main Post Office yafakwa kwiNcwadi yeSizwe yokuBhaliswa kweNgingqi (# 86000686) eCuster County, Montana ngo-1986.
Umthombo: "Imbali ye-ofisi yeposi ye-Miles City" kwi milescity.com/history/stories/fte/historyofpostoffice.asp; kunye neRejista kaZwelonke yeZindawo zeMbali (eyafikelela ngoJuni 30, 2012]
Hinsdale, i-Post Office yaseNew Hampshire
Isakhiwo seofisi yesithuba e-Hinsdale, eNew Hampire. Khetha umfanekiso ukujonga ubungakanani obupheleleyo kwiwindow entsha. Ifoto © 2012 Shannon (Shan213), i-Creative Commons-ilayisenisi kwi-flickr.com.
Ipostile Ekubeni 1816:
I-McAlesters ' Field Field' kwizindlu zaseMerika ichaza lo mhlaba njengeGable Front Family Folk indlu eqhelekileyo kwi-East Coast ye - US ngaphambi kweMfazwe Yomphakathi. I-pediment kunye neentsika zibonisa impembelelo yokubuyiselwa kweGrike , efumaneka rhoqo kwi-American Antebellum Architecture .
I-post yaseHinsdale, eNew Hampshire isebenzile kule sakhiwo ukususela ngo-1816. Lo ngumdala kunabo bonke osebenzela i-US Post Office kwisakhiwo esifanayo. Ingaba le nto ingabonakaliyo ukuyibiza ngokuthi "imbali?"
Imithombo: McAlester, Virginia kunye noLee. Isikhokelo seKhaya kwizindlu zaseMerika. Inew york. UAlfred A. Knopf, Inc. 1984, iphe. 89-91; kunye ne-USPS Facts page [kufumaneka ngoMeyi 11, 2016]
Isakhiwo saseJames A. Farley, kwisixeko saseNew York
Isakhiwo saseJames A. Farley, i-Post Office yaseNew York, ngoJuni 2008. Khetha umfanekiso ukujonga ubungakanani obupheleleyo kwiwindow entsha. Ifoto © Paul Lowry, Creative Commons-ilayisenisi kwi-flickr.com.
Eyakhelwe ekuqaleni kwekhulu lama-20, i- Beaux Arts style yaseJames James Farley Post kwiSixeko saseNew York yayiyiminyaka enkulu yepositi e-United States-ii-393,000 iinyawo eziqhelekileyo kunye neebhloko zedolophu ezimbini. Nangona ubukhulu beentsika zeClassical , isakhiwo sisohlwini lwe-US Postal Service. Urhulumente waseNew York uthenge isakhiwo ngezicwangciso zokulondoloza nokuyihlaziya ngokusetyenziswa kwezothutho. Umcwangcisi uDavid Childs iintloko yeqela eliphinda lihlaziywe. Bona uhlaziyo lwabahlobo be-website ye-Moynihan Station.
Ngubani uYakobi A. Farley? ( PDF ) >>
I-ofisi yeposi yase-Cañon ye-1933 yaba yi-Fremont Centre yoBugcisa ngo-1992. Khetha umfanekiso ukujonga ubungakanani obupheleleyo kwiwindow entsha. Ifoto © Jeffrey Beall, Creative Commons-ilayisenisi kwi-flickr.com.
Njengezakhiwo ezininzi zeofisi zeposi, i-ofisi yeposi yaseCañon City kunye neZakhiwo zoSakhiwo zakhiwe ngexesha lokuPhukisa kweNdlu. Eyakhelwe ngo-1933, isakhiwo ngumzekelo we- Italian Renaissance Reveval . Isakhiwo sebhloko, esibhalwe kwiRejista kaZwelonke yeZakhiwo zeMbali (1/22/1986, 5FN.551), sinezakhiwo zomhlaba ezenziwe ngeemabula. Ukususela ngo-1992, isakhiwo sembali siye saba yi-Fremont Centre yezoBugcisa-umzekelo omhle wokuphinda usebenzise kwakhona .
Umthombo: "Imbali Yethu," Isiko seFreeemone soBugcisa kwi-www.fremontarts.org/FCA-history.html [efikelele ngoJuni 30, 2012]
USt. Louis, i-Post Office yaseMissouri
Ukususela ngo-1884 ukuya kowe-1970, lo mgangatho woBugcisa boBukhosi boBukumkani yi-US Post Office eSt. Louis, eMissouri. Khetha umfanekiso ukujonga ubungakanani obupheleleyo kwiwindow entsha. Ifoto © Teemu008, Creative Commons-ilayisenisi kwi-flickr.com.
I-post ye-post edala eSt. Louis yenye yezakhiwo zembali e-United States.
Kwavulwa: 1884, njengenxalenye yoLwakhiwo Lwemfazwe Yomphakathi
Umsebenzi wasekuqaleni: I- US Custom House, iNkundla yesithili sase-US kunye ne-Post Office
Umqambi: U- Alfred B. Mullett, oye wakha i- Office Office Building eWashington, DC
Isakhiwo sobugcisa: Ubuso boBukumkani
Ulungiso: iiphakhethi; bushushu; isinyithi esicinywe ngumlilo esetyenziswe kuyo; kwinqanawa yomzila wendlela yomnxeba
Ukulondolozwa: Iofisi yeposi ivalwe ngowe-1970 kwaye isakhiwo sahlaselwa. Ngokusebenzisa uluhlu lweentsebenziswano, abaphuhlisi balondoloze isakhiwo sokubuyisela ukusetyenziswa ngokufanelekileyo phakathi ko-1998 no-2006.
Umthombo: USt Louis Louis US Custom Custom & Post Office Building Associates, LP [kufumaneka ngoJuni 30, 2012]
I-Old Post Office, eWashington, DC
Umfanekiso we-Old Post Office kwinqanaba laseWashington, iSithili saseColumbia. Ifoto nguMark Wilson / Getty Izithombe Iindaba / i-Getty Izithombe (ihlanjwe)
I-Old Post Office yaseWashington, DC iqhutywe ibhola yokuqhaqha kabini, kanye ngo-1928 kwakhona kwakhona ngo-1964. Ngemizamo yokulondolozwa njengeNancy Hanks, isakhiwo sagcinwa kwaye songezwa kwiRejista kaZwelonke yeZindawo zeMbali ngo-1973. Ngo-2013, i-US Ulawulo lweeNkonzo eziPhezulu (i-GSA) yaqeshisa isakhiwo sembali kwi-Trump Organisation, eyayilungisa ipropati ibe "ukuphuhliswa kokusetyenziswa kokunethezeka."
Umcwangcisi: Willoughby J. Edbrooke
Eyakhelwe: 1892 - 1899
Isakhiwo sobugcisa: Ukubuyiselwa kwamaRoma
Izinto zokwakha: i- granite, isinyithi, isinyithi (isakhiwo sokuqala se-steel frame esakhiwe eWashington, DC)
Iindonga: iindonga ezinamanqina ezintlanu ezinama-granite zindonga zixhasa; Iibhanki zensimbi zisetyenziselwa ukuxhasa iiplanga zomgangatho wangaphakathi
Ukuphakama: amabali ama-9, isakhiwo esona sona side kunazo zonke kwisikhululo sesizwe, emva kweMonument yaseWashington
I-Clock Tower: 315 iinyawo
Ukulondolozwa: Isicwangciso sokuvuselela i-1977 ukuya ku-1983 kwakuquka ukuxuba kweendawo zokuthengisa ezithengiswayo kumgangatho ophantsi kunye namaofisi aseburhulumenteni kumazinga aphezulu. Le ndlela yokubuyisela indlela yokubuyisela ukubuyiswa kwayo yanikwa ingqwalasela kazwelonke njengendlela efanelekileyo yokulondolozwa kwimbali.
"Into ephawulekayo ngaphakathi ngaphakathi yinkankwezi yokubala e-nine-story-overpowered by a bright skylight ekhukula indawo yangaphakathi kunye nokukhanya kwemvelo." Xa kwakhiwe, igumbi lalingumkhulu, ungaphazamiseki indawo yangaphakathi eWashington. wongeza i-elevator eneglasi kwinqanaba elisezantsi le-tower ukubonelela ukufikelela kwiindawo zokubona. I-glass atrium ephantsi kweso sakhiwo yongezwa ngo-1992. " -US Ulawulo lweeNkonzo eziPhezulu
I-GSA ne-Trump Organisation iyafikelela kwi-Old Post Office yokuhlala, ngoJuni 5, 2013, iwebhusayithi ye-GSA
I-Old Post Office, eWashington, DC, kwi-website ye-GSA
I-Old Post Ofisi yokuPhuhliswa, i-website ye-GSA
Indlela i-Trumps yafika ngayo i-Old Post Office Pavilion ngoJonathan O'Connell, iWashington Post, ngo- Agasti 17, 2012
Umthombo: I-Old Post Office, iWashington, DC, i-General General Administration Services [eyafika ngoJuni 30, 2012]
Malunga neSikhumbuzo saseBerlin yeSikhumbuzo saseBerlin
Iingcebiso ze-Skier zokuqala
Vavanyo lweNcwadi evuliwe
Imilinganiselo yokuphakama kweeKhabhinethi eziphezulu zeC Kitchen
Isikhokelo sembali kunye nesimboli seHapkido
Yinqoba Intliziyo Yowesifazana seGemini
Iikhowudi zeNtshonalanga zeNtsholongwane ze-Online kunye neeNgcaciso
Uyihlo Othandekayo: Abantwaba Abangama-Horror Movie Fathers
Amaxwebhu aPhezulu aPhephayo ayenziwe
Ukukhetha iMifutshane kunye neendlela zokunqanda u-Elbow Tennis